MoeMaKa Burmese News & Media | USA – editors @ moemaka.net ((510) 854-6501)။ ရန်ကုန် ဆက်သွယ်ရေး – အမှတ် ၂၅၄၊ ပထပ်၊ လမ်း ၄၀၊ ကျောက်တံတား၊ ရန်ကုန်။ (ဖုံး – ၀၉ ၂၅၂ ၂၄၉ ၀၉၄ ၊ ၀၉ ၄၂၁ ၇၄၃ ၇၅၃ ၊ ၀၉ ၅၀၄ ၁၀ ၅၈) ဖြန့်ချိရေး – ဆိပ်ကမ်းသာစာပေ – အမှတ် ၁၃ / ၃၈ လမ်း။ ပလာဇာဈေးသစ် ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ | Page 878
>Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity - Freeedom Day
>Cartoon Beruma - SPDC and white elephant
>In Burma, you will be arrested for doing right things
>Cartoon - Generals say No to 'No' vote
အမာရီလို ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ဆရာတော်အရှင်ဇ၀နနဲ့ မြန်မာမိသားစုတို့ တွေ့ဆုံကြမည်
>Mar Mar Aye – To Mother Land
> အမိမြေသို့မာမာအေးဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈ အို … အမိမြေလွမ်းနေသူ မယ့်အား၊ ခွင့်သနားတာဖြင့်လျှောက်ကြားသည့်အရေး၊ နားလည်ပေးနော်။ ထွန်းပေါ်နေထွက်၊ ရေတက်ဖွားမှာကျောသား ရင်သား၊ မခြား ကြည်ဖြူတေးကြူချိုအေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ချစ်၊ပြည်သူ့ ချစ်ခဲ့။ ရှင်ချစ်သာသနာ၊...
>How you can wish Happy New year to Nargis Suvivors
> ၂၀၀၈ နာဂစ်အလွန် ငါတို့အားလုံးရဲ့ မျက်နှာများမိုးမခ အထောက်တော် (ရန်ကုန်)ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈၂၀၀၈ မေလ ၁၅၊ လပွတ်တာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ခိုလှုံနေရတုန်း စစ်တပ်က ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ မရွေ့ခင် သူတို့တွေရဲ့ မျက်နှာတွေ၊...
>Taryar Wai Yan – 21st Anniversary of Burmese Illustration Artists Puzaw Pwe
> ၂၁ ကြိမ်မြောက် စာနယ်ဇင်းသရုပ်ဖော် ပန်းချီဆရာကြီးများ ဂါရပြုပွဲ အမှတ်တရ တာရာဝေယံ (မိုးမခ ဓာတ်ပုံ) ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈ မြန်မာစာနယ်ဇင်း သရုပ်ဖော်ပန်းချီဆိုတာ မြန်မာပန်းချီသမိုင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။...
>Tint Lwin – How to use Google Reader
> ကျော်ဝင်ပြီးမှ ကြည့်လို့ရတဲ့ ၀က်ဆိုက်တွေကို (RSS) အာရ်အက်စ်အက်စ်နဲ့ ကြည့်ရအောင် တင့်လွင် ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈ နေ့စဉ်လိုလို ၀င်ကြည့်နေတဲ့ သတင်းဝက်ဆိုက်တွေကို နေ့စဉ် (Proxy) ပရောက်စီနဲ့ ကျော်နေရတဲ့ ဒုက္ခ၊...
>Moe Cho Thin – Home Sweet Home
> ရွှေပြည်ဌာန သာချင်စွ မိုးချိုသင်း ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈ ဒီနှစ်သစ်မှာ … လိုရာဆန္ဒ ပြည့်စုံ ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ မိသားစု၊ ကိုယ်ချစ်ခင်သူများနဲ့ ဝေးကွာနေရသူများ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် ဆုံဆည်း နိုင်ကြပါစေ။...
>elephants eat christmas trees
> ခရစ်စမတ်သစ်ပင်စားသော ဂျာမဏီရောက် မြန်မာ့ဆင် သတင်းဓာတ်ပုံ ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၈ ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ကို စားသောက်နေသော မြန်မာပြည်ဖွား ဆင်မကြီး သီဟဖြူ (Thi Ha Phyu) နှင့် သားငယ် မင်းဂျွန်...
>demonstration in Rgn
> “ဆန္ဒပြသူများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လွှတ်ပေး” စာတန်းကိုင်ဆွဲကာ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှ ချီတက်ခဲ့ကြရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရှေ့အရောက်တွင် တားဆီး ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသည်။ (ဓာတ်ပုံ – MMT) ရန်ကုန်တွင်ဆန္ဒပြမိုးမခအထောက်တော် ၆ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ယနေ့ညနေပိုင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်ရေး...
>May Nyane’s poem – 01
> ရုပ်ပုံ (ပုံတူ) မေငြိမ်း ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ လက်စသတ်တော့ ဗင်ဂိုးရဲ့ နေကြာပန်းအိုးဟာ အာလူးစားသူများရဲ့ စားပွဲအလယ်မှာ ရှိနေတာပါပဲ။ အလျှံညီးညီး မီးကျီးခဲလို တောက်ပ ဘ၀ဟာ ပူလောင်လှချည့် ဒါပေမယ့်...
>From 2008 To 2009 – Still Standing Strong, Our University Tree
> ၂၀၀၈ နာဂစ်အလွန် ၇ လ၊ ၂၀၀၉ သို့ အ၀င် … အမှတ်တရ သစ်ပုတ်ပင် ဖိုးဂျံ ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၈ အကုန် ၂၀၀၉ အ၀င်မှာ...
>Burmese Helping Burmese Fund to continue on 2009 from MoeMaKa Group
> မိုးမခရဲ့ “Burmese Helping Burmese” မြန်မာအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းခြင်း အစီအစဉ် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ မိုးမခ ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ ၂၀၀၇ သံဃာ့အရေးတော်ပုံက အစပြုပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စတင်ခဲ့သည့် အမျိုးသားရေး...
> ၃၃ ကြိမ်မြောက် ကာတွန်းဆရာကြီးများအား ဂါရ၀ပြုပူဇော်ကန်တော့ပွဲ မြင်ကွင်း ကာတွန်းဆရာကြီးများ ကန်တော့ပွဲ သမိုင်းပုံရိပ် အမှတ်တရ စာစောင် မှတ်တမ်း မိုးမခ ဓာတ်ပုံ သတင်း ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၈ No...
> ၃၃ ကြိမ်မြောက် ကာတွန်းဆရာကြီးများအား ဂါရ၀ပြု ကန်တော့ပွဲတာရာဝေယံဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ ၁၉၃၄ ခုနှစ်မှာ ကာတွန်းဦးဘဂျမ်းနဲ့ ဦးဟိန်စွန်းတို့ဟာ ကမ္ဘာမှာ မပေါ်ဖူးသေးတဲ့ ကာတွန်း မီးပုံး မီးထွန်းပွဲကို တန်ဆောင်တိုင်ကာလမှာ စတင်...
>Mar Mar Aye – 258
> ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ် (၂၅၈)စာရဲ့လေးနက်မှုမာမာအေးဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်- မာအေးချစ်တဲ့ သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့ အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ၊...
>NLD marked 20 year anniversary of Daw Khin Kyi of Burma ‘s dismise
> လွတ်လပ်ရေး ဘခင်ကြီး အာဇာနည် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း၏ ဇနီး၊ မြန်မာပြည် အတိုက်အခံပါတီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိခင် ဒေါ်ခင်ကြည် ကွယ်လွန်ခြင်း အနှစ် ၂၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဲန်အယ်ဒီ...
> The Generation Waves – Free Burma Poster December 29th, 2008 No tags for this post. Related posts No...
>28th Dec 2008 – Sunday Weekly Radio Program
> မိုးမခရဲ့ ရေဒီယိုချစ်သူများ ဆစ်ဒနီဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ရေဒီယိုအိမ် – ဦးပန်တျာသတင်းပဒေသာ သီချင်းပဒေသာ၂၇၄၈ ခုနှစ် ဆစ်ဒနီ ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်များသရုပ်ဆောင် ထွန်းထွန်းနိုင်ကွယ်လွန်ခြင်း နှင့် ၀င်းဦးကွယ်လွန်ခြင်း နှစ် ၂၀ အမှတ်တရဆစ်ဒနီတလွှား...
>Tin Aung Ni cartoon – 02
> ကာတွန်းတင်အောင်နီဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
>Aung Way – 22
> ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခန်း (၂၂)အောင်ဝေးဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ ‘မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ချစ်နေသေးသည်၊ ကြွေးကြော်စူးရဲ၊ အားမာန်ခဲတဲ့၊ တိုက်ပွဲထဲက ပြည်သူတွေ’ ကွယ်လွန်သူ ကဗျာဆရာ မောင်လေးအောင်ရဲ့ ‘အချစ်ဖြင့် စီးဆင်းနေသော နှလုံးအိမ်’ ကဗျာကို ကျနော်...
>Maimi – 04
> အမှတ်တရ မိုင်ယာမီ (၄) ဉာဏ်ဦးမောင်ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၈ မိုင်ယာမီ၊ တချို့ကတော့ မီယာမီ-တဲ့။ ဘယ်လိုပဲ ခေါ် ခေါ်၊ သေချာတာကတော့ မိုင်ယာမီ ဆိုတာ ထင်ရှား ကျော်ကြားတဲ့ မြို့တမြို့...
>U Nann Wai by MSY
> ပန်းချီဆရာကြီး ဦးနန်းဝေမောင်စွမ်းရည်ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ ကျနော်တို့ငယ်စဉ်ကတော့ ကိုယ့်ထက် ၁၀ နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ ပန်းချီဆရာကြီး ဦးနန်းဝေကို “ကိုနန်းဝေ”လို့ပဲ ခေါ်ခဲ့တယ်။ သူ့နာမည်ကို ကြားဖူးစတုန်းက “နန်းဝေ”ဆိုတဲ့ နာမည်လေး လှလိုက်တာလို့ အောက်မေ့ဖူးတယ်။...
> နိုင်ငံရေးနဲ့ စာပေအနုပညာ (၁၉)နိုင်ငံရေးအကြားမှ စာပေအနုပညာထိန်လင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၈ စာပေအနုပညာသမားတွေဟာ သူတို့ဖြတ်သန်းကြတဲ့ ခေတ်တွေကို ထင်ဟပ်စေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်သလို အဲဒီခေတ်တွေရဲ့ အခြေအနေ အဖြစ်အပျက်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းရသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။...
> U Win Tin at NLD on The Young & The Future – Talk #3 16th Dec 2008 No...
> တင်အောင်နီ ကာတွန်းဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၈မူရင်း – ကလျာမဂ္ဂဇင်း No tags for this post. Related posts No related posts.
> ပန်းချီ ထိန်လင်း – နာဂစ် ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈ No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 878 of 939«1...876877878879880...939»